पशुपतिनाथ मन्दिर यसरि खुल्ला हुँदै, दर्शन गर्न जाने भक्त जनले अपनाउनु पर्नेछ यस्तो नियम !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/पशुपतिनाथ मन्दिर यसरि खुल्ला हुँदै, दर्शन गर्न जाने भक्त जनले अपनाउनु पर्नेछ यस्तो नियम !!
पशुपतिनाथ मन्दिर यसरि खुल्ला हुँदै, दर्शन गर्न जाने भक्त जनले अपनाउनु पर्नेछ यस्तो नियम !!
कोरोनाका कारण लागू भएको लकडाउनका कारण बन्द भएको पुजा पशुपतिनाथ मन्दिरमा अब सुचारु हुने भएको छ । लकडाउन भए देखि नै मन्दिरमा भक्त`जनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । अब पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा पूजाको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
मन्दिर खुलेपछि स्वास्थ्य सचेतना अपनाउदै भक्तजनलाई मन्दिर दर्शनको ब्यवस्था मिलाइने छ । भक्तजनलाई सरकारले तोकेअनुसारको दूरीमा राख्ने, पर्याप्तमात्रामा स्वयंसेवक खटाउने, चन्दन पातमा राखेर दिने निधारमा नलगाइदिने लगायत व्यवस्था गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ ।
आगामी असार २१ गतेदेखि मठ मन्दिर एवं सार्व`जनिक यातायात दूरी कायम गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने गरी खुला हुनसक्ने भएकाले त्यसै अनुसार तयारी गरिएको छ । असार १ गतेदेखि पशुपति क्षेत्रको सरसफाइका लागि सफाइ`कर्मीलाई विशेष रुपमा परिचालन समेत गरिएको छ । चैत ११ गतेदेखि जारी लकडा`उनका क्रममा पशु`पति क्षेत्रको सबैतिर सफाइ हुन नसकेको गुनासो स्थानीयवासी बाट आएको थियो ।
असार १ गतेदेखि लकडा`उन खुकुलो बनाइए पनि मठमन्दिर, शैक्षि`क संस्था र सार्वजनिक यातायात भने खोलिएको छैन । पशुपतिनाथ मन्दिर हिन्दु धर्माव`लम्बीहरुका लागि महत्वको मन्दिर हो ।
विश्व भरका हिन्दु धर्मा वलम्बीहरु पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शनका लागि आउँछन् । अहिले लकडाउनका समयमा भने मन्दिर बन्द भएका कारण दर्श`नार्थी पु`ग्न सकेका थिएनन् । यातायात र हवाई साधन ब`न्द भएका कारण पनि धा`र्मीक पर्यट`नमा ह्रा`स आएको छ ।